Diyaarad rakaab ah oo ay saarnayeen 188 ruux oo ku dhacday badda Indonesia - Halbeeg News
JAKARTA (HALBEEG)- Diyaarad rakaab ah oo ay saarnayeen 188 ruux ayaa lagu soo waramaya inay ku dhacday badda dalka Induniisiya kadib markii ka kacday magaalada Jakaarta ee caasimadda Induniisiya.
Diyaaradan oo nooceedu yahay Boeing 737 oo ay leedahay shirkadda Lion Air ayaa ku sii jeeday Pangkal Pinang oo ah magaalada ugu weyn jasiiraddaha Bangka Belitung.
Duulimaadkan oo lambarkiisu ahaa JT 610 ayaa waxaa la rumeysan yahay in dadkii saarnaa ay dhinteen.
Afhayeenka hay’adda gurmadka Indoneisa Yuusuf Latif ayaa sheegay in diyaaraddan nooceedu ahaa Boeing 737 MAX 8, islmarkaana ay aheyd mid cusub, isagoo sheegay in 30 ilaa 40 mitir gudaha u gashay badda.
“Diyaaradda ayaa badda hoos u gashay 30 ilaa 40 mitir,” sida uu wakaaladda wararka AFP u sheegay Yusuf Latif oo ah afhayeenka Hay’adda Gurmadka.
Yuusuf Latif ayaa tilmaamay in wali baadigoob ugu jira burburka diyaarada iyo hadii ay jiran dad ka badbaaday shilkan.
Madaxa shirkadda diyaaradaha ee Lion Air Edward Sirait ayaa sheegay in diyaaradda ay cilad farsamo qabsatay markii ay kasoo laabaneysay Baali oo ay u soo socotay Jakaarta balse waxa uu sheegay in si buuxda loo xaliyay ciladaasi, maamulaha ayaa mar la weydiiyay ciladda dhabta ee qabsatay diyaaradda aan sheegin.
Shirkadda sameysay diyaaraddan dhacday oo ku taalla magaalada Chicago ayaa ka tacsiyadeysay dhimashada 189-ka qof eek u nafwaayay shilka waxa ayna tilmaantay in murugada iyo tiiraanyada ay la qeybsanayaan eheladii dadkoodii ku waayay shilkan.
Shirkadda Diyaaradaha ee Lion Air ayaa ah shirkadihii ugu danbeeyay ee ku soo biiray suuqa diyaaradaha balse sidoo kale waxa ay noqotay shirkadda ugu ballaaran ee dalkaasi ka howlgasha.
Ciidamo ka tirsan AMISOM oo qarax lagula eegtay gobolka Hiiraan